खत्म को घरेलू बजार मा सामाग्री को फर्श धेरै व्यापक दायरा मा प्रस्तुत। तैपनि, लगभग हरेक वर्ष नयाँ नयाँ, व्यवसायीक र साधारण उपभोक्ताहरु को ध्यान आकर्षित गर्ने थप परिष्कृत सामाग्री छन्।
सबैभन्दा हाल, ठूलो निर्माण स्टोर को सलाहकार आफ्नो ग्राहकहरु Artvin तल्ला प्रदान गर्न थाले। यो के हो? निर्माता (Tarkett कम्पनी) को अनुसार, जो विधानसभा प्रविधि सेरेमिक टाइल्स वा को छत तुलना गर्न सकिन्छ एक अद्वितीय सामाग्री छ। रंग र टाइल को आकार को एक किसिम तल्ला डिजाइन मा सिर्जना गर्न अनुमति, तपाईं सपना देख्यो।
Artvin तल्ला - यो के हो?
को हुन्छन् जो यस laminate,:
- रेशा आयाम सूचकांक को सुरक्षा को लागि जिम्मेवार। Artvin बनेको टाएलहरू संकुचित छ, र विभिन्न भार को कार्य द्वारा फिर्ता लिया गर्न सकिन्छ।
- calendered तहहरू (सामान्यतया दुई)। तिनीहरूले रक्षा को उपस्थिति टाइलहरू र भार गर्न भौतिक प्रतिरोध प्रदान गर्नुहोस्। यो सामाग्री को भुइँमा फर्नीचर को एडी मा चिह्न छोड्न छैन।
- सजावटी तह कोटिंग को उपस्थिति सिर्जना गर्छ।
- पारदर्शी इम्बोस गरिएको पत्र छल्ले राहत emphasizing को naturalness को बाहिरी पक्षमा सिर्जना गर्छ। यो पत्र सामाग्री को बलको ठूलो डिग्री प्रदान गर्दछ।
- वार्निश (ब्रान्ड चरम संरक्षण), कम्पनी Tarkett विकास हो। यसलाई पहनने प्रतिरोध को एक उच्च स्तर को छ, भन्दा7पटक यी तथ्याङ्कले यस्तै सामाग्री छ।
Artvin तल्ला उच्च गुणवत्ता विशेषताहरु छ। यसलाई पूर्ण तापमान मा परिवर्तन ल्याउँछ, टिकाउ, चिस्यान र लगाउने प्रतिरोधी छ। त्यहाँ फर्श को विकल्प बारे एउटा प्रश्न छ जब यी कारणहरूले सबै धेरै महत्वपूर्ण छन्। यसलाई अन्य विकल्प विचार गर्न आवश्यक छ।
Artvin तल्ला प्राकृतिक सामाग्री अनुकरण एक उत्कृष्ट उपस्थिति छ। डिजाइनर पनि सबभन्दा साहसी विचार को भुइँमा पूरा गर्न यो प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, एक सुरिलो संरचना ओक र संगमरमर, स्लेट र बीच जडान गर्न। यस विषयमा विकल्पहरू धेरै हुन सक्छ। टाइल वा planks विभिन्न तरिकामा जाँदैछन् - को छत, herringbone, एक ईटा र यति मा। निर्माता आफ्नो ग्राहकहरु 10 योजनाहरु स्टाइल प्रदान गर्दछ। तिनीहरूले विवरण मा सामाग्री संग आपूर्ति निर्देशनहरू मा वर्णन छन्।
यो खरीदार स्टाइल कस्तो छ, रुचि राख्नुहुन्छ भनेर प्राकृतिक छ। Artvin तल्ला एकदम बस माउन्ट। यो पछि छलफल गरिनेछ।
सामाग्री को लाभ यातायात को सजिलो, सामाग्री को व्यावहारिकता समावेश गर्नुपर्छ। साथै, यो कोटिंग लामो सेवा जीवन छ। निर्माता, Tarkett कम्पनी उपस्थिति र प्रदर्शन नफेरी, विशिष्ट सेवा सामाग्री को 15 वर्ष ग्यारेन्टी। यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ प्रमाणपत्र पुष्टि गर्छ जो पर्यावरण कवरेज, "जीवन को पात।" फलस्वरूप, यो तल्ला पनि नर्सरी स्थापित गर्न सकिन्छ।
धेरै उपभोक्ताहरु पहिले नै Artvin तल्ला प्रयोग गरेका छन्। यसलाई के तिनीहरूले आफैले थाहा छ। अक्सर अन्य सामाग्री संग तुलना आधुनिक कोटिंग छ। उदाहरणका लागि, आफ्नो layering र व्यावहारिकता राम्रो, उच्च गुणस्तरीय लिनोलियम, सौन्दर्य धेरै समान छन् र शान टुक्रा काठ को छत यसलाई ल्याउन। तर महत्वपूर्ण मतभेद छन्:
- artvinilovaya टाइल्स, लिनोलियम को विपरीत, विभिन्न डिजाइन, छैन वेब सामाग्री भनेर मोड्युलहरू हुन्, तल्ला ढाँचा विविधता गर्न सक्षम छ;
- को छत विपरीत यसलाई "न्यानो तल्ला" सिस्टम प्रयोग गर्न सकिन्छ;
- खुशी संग मा स्पर्श गर्न एकदमै रमाइलो कोटिंग, तपाईं खाली खुटा, जो टाइल को साँचो छैन हिंड्न सक्छौं।
Artvin तल्ला - तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, merits धेरै नयाँ सामाग्री छ। यसको मूल्य पनि laminate लागत बराबर छ। यो प्रति वर्ग मीटर 665 1600 मा rubles देखि दायरा। केही खरीदारों लाग्छ यो माइनस छ। हुनत यो सबैले सहमत छ।
Artvin तल्ला: आफ्नो हातमा स्थापना निर्देशन
हामी माथि उल्लेख गरिएझैं कोटिंग को बिछाउने पनि गाह्रो पनि एक मानव को लागि, टाढा निर्माण देखि हुने छैन। तर, यो मन मा सार्ने गर्नुपर्छ यो सामाग्री संग काम गर्दा शुद्धता र ध्यान आवश्यक छ। को को बेवास्ता आवश्यक त्रुटिहरु कोटिंग गुणस्तर असर entail।
कुनै पनि परिष्करण प्रक्रिया धेरै चरणमा विभाजन गरिएको छ। यो कुनै अपवाद र बिछाउने फर्श छ।
सतह तयारी अनिवार्य Artvin तल्ला आवश्यक छ। स्ट्याकिङ प्रविधि पहिलो स्थानमा चरणमा एक नम्बर पनि समावेश छ। यो कामको गुणस्तर देखि हदसम्म नतिजा निर्भर गर्दछ।
यो उल्लेख गर्नुपर्छ कोटिंग कुनै पनि सतह मा छैन राखे गर्न सकिन्छ। यो प्लाईवुड, chipboard, लिनोलियम, hardboard, काठ तल्ला। अर्को शब्दमा, समय फरक भार को कार्य अन्तर्गत deform गर्न सुरु हुनेछ जो ती सतहहरु मा। फलस्वरूप, आफै विरूपण विषय र टाइल, र यो छैन सहन गर्न सकिन्छ।
आदर्श आधार Artvin ठोस तल्ला अन्तर्गत टिकाउ छ, हेडबैंड भर। तर त्यो सम्झना सिमेन्ट यो मामला मा उपयुक्त छैन। स्व-leveling तरल फर्श प्रयोग गर्न राम्रो।
आधुनिक निर्माण बजार फरक निर्माताहरु यी उद्देश्यका लागि ड्राई मिक्सहरू दायरा प्रदान गर्दछ। यो सिमेन्ट प्लास्टर वा बहुलक रचनाहरूको। यो बाद रुचि थप expedient छ। यस्तो सतह एउटा सानो मोटाइ, तर आदर्श सतह, उच्च स्थायित्व द्वारा विशेषता छ।
बाढी सम्बन्ध पछि यो राम्ररी सुक्खामा आवश्यक छ। त्यसपछि, तल्ला सतह राम्ररी धूलो देखि साफ गर्नुपर्छ। यो नियमित भ्याकुम क्लिनर मदत गर्नेछ। मस्यौदाहरू बच्न सफाई, सबै सञ्झ्याल बन्द अघि।
अब तपाईं प्राइमर गर्न अगाडि बढ्न सक्छ। polyurethane आधारमा दुई-घटक सामाग्री प्रयोग गर्न राम्रो। यो आसंजन को गुणक वृद्धि र एक शीर्ष तह reinforcing हुनेछ।
फेरि, कि तपाईं Artvin तल्ला स्ट्याक गर्दा शुद्धता, आवश्यक छ। यो प्रविधी केही कारणले धेरै घरेलू मालिकको वास्तै जो एक अनिवार्य चरण, राख्दै समावेश छ। हामी मार्कअप बारेमा कुरा गर्दै छन्। यसलाई धेरै हदसम्म मात्र होइन गुणस्तर तर पनि सरलता, स्थापना सजिलो मा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, प्रति टाइल 40 वर्ग मीटर को कोठा मा राम्रो-चिन्ह लगाइएको-सर्किट घण्टा एक जोडी द्वारा गर्न सकिन्छ।
तपाईं पहिलो कोठा को केन्द्र निर्धारण हुनुपर्छ। यो गर्न, एक विकर्ण लागू - र आफ्नो इन्टरसेक्ट तपाईं दर्शाउन लागि आवश्यक हुनेछ। केन्द्र मार्फत दुई लम्ब रेखा कोर्नुहोस्। तिनीहरूले कोठा4समकोणहरू मा विभाजित।
बिस्तारै यो सबै साइटहरु भर्नु, केन्द्र बाट हुनुपर्छ टाइलहरू राख्नु गर्न थाल्छन्। यो योजना सीधा छ। को पहिले लेपित रेखाहरू 45 डिग्री को एक कोण मा केन्द्र देखि - तपाईं एक विकर्ण विधानसभा आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने, लेआउट थप रेखाहरू खर्च हुनेछ।
अन्तिम चरण - स्थापना
टाइल artvinilovoy को स्थापना को लागि लागू एक एक्रिलिक टास्ने। एक subfloor लागू यसको वर्दी तह TROWEL notched। को टास्ने जुन बेलामा तपाईं उसलाई संग काम गर्न सक्छन् समय को एक लम्बाइ छ भनेर याद गर्नुहोस्। नियम, यो एक घण्टा छ। तसर्थ, समाधान जो तपाईं यो समयमा समाधान गर्न सक्छन् टाइल यस्तो साइट, लागू गर्नुपर्छ। तपाईं म्याद पूरा गर्छन् भने, टास्ने हटाइएको र नयाँ तह लागू गर्नुपर्छ।
को टास्ने संरचना लागू गरेपछि तुरुन्तै काम सुरु गर्दैन। यसलाई 8-10 मिनेट खडा गरौं। तपाईं त टाइल राखे गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक मोड्युल पछाडि, तपाईं नेतृत्व विधानसभा माउन्ट जसमा निर्देशन देखाउँछ कि एक तीर देख्नुहुनेछ। यो निकै प्रक्रिया तल्ला ढाँचा बिना सुविधा।
प्रत्येक कवर तत्व पहिले टास्ने संग लेपित एक सतह मा माउन्ट र हात द्वारा थिचिएको छ। किनाराको साथ, तपाईं यसलाई रोल रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो आन्दोलन प्यानल को किनाराको गर्न केन्द्र देखि उत्पादन गर्छ। टाइलहरू अंतराल बिना प्रत्येक अन्य नजिक राखिएको छन्। यो तिनीहरूलाई लोड अन्तर्गत सञ्चालन समयमा सार्न अनुमति छैन। विशेषज्ञहरु टाइल राम्रो थिचिएको छ, र यसको किनारा एक समय मा र्याप छैन पक्का हुन नयाँ तल्ला पुन: रोल गर्न 10-15 मिनेट सुझाव दिन्छौं।
पर्खालहरु नजिकै कोठा को किनाराको मा Artvinilovye प्यानल सधैं एक पुरा को रूप मा आउन छैन। फलस्वरूप, तिनीहरूले छोट्याउन हुनुपर्छ। एकदम सरल बनाउन - एक धारिलो चक्कु संग। कृपया यस्तो विवरण ध्यान दिनुहोस्:
- Trimming कवर को सामने पक्षमा मात्र गरिन्छ;
- भत्ता र tolerances बिना सटीक चिह्नों बाहिर हुनुपर्छ;
- अंकन को योजना लाइन अनुसार कडाई गरिन्छ को ठाँउ मा एक चक्कु कटौती।
- यो निशान मा टाइल मोड र पूर्ण एक चक्कु यसलाई काटे।
स्थापना समयमा जब तपाईं टाइल मा क्लिक गोंद यसको सीमा बाहिर विस्तार हुन सक्छ, र सतह मा एक ट्रेस छोड्नुहोस्। यो बचा गर्नुपर्छ। तर यो हुन्छ भने, तुरुन्तै रक्सी संग moisten राम्रो छ जो एक नैपकिन संग हटाउन।
उसोभए, तपाईं Artvin तल्ला राखे। धेरै - यो के हो, अब तपाईंले यो कसरी शैली थाहा छ। यो यस्तो तल्ला को कसरी हेरचाह गर्न जान्न रहनेछ।
सबै टाइलहरू राखे गरिनेछ भएपछि, यसलाई पूरा गर्न आवश्यक छ भिजेको सफाई तल्ला। कोटिंग आधार गर्न पूर्ण चिपके छ जब तपाईं, यो केवल तीन दिन पछि गर्न सक्नुहुन्छ। कि पछि, फर्श पीवीसी उत्पादनहरु लागि डिजाइन गर्दै छन् एजेन्ट को वाहेक संग धोए गर्न सकिन्छ।
Artvin तल्ला - आज हामी नयाँ कोटिंग गर्न शुरू। उहाँको बारेमा प्रतिक्रियाहरू सकारात्मक र उत्साही खुलस्त नकारात्मक विभाजित थियो।
ग्राहकहरु पहिलो समूह पूर्ण आफ्नो खरीद सन्तुष्ट। तिनीहरूले स्टाइलिश र विविध डिजाइन, सञ्चालनको एक पर्याप्त लामो अवधि, सजिलो मर्मतका, एक पर्याप्त मूल्य सन्तुष्ट छन्।
खरीदारों को दोस्रो समूह स्थापना को जटिलता, टाइलहरू को गरीब गुणवत्ता, उल्लेख जो 5-6 को seams मा unstuck महिनामा। निर्माता देखि विशेषज्ञहरु गरिब स्थापना गर्न यी समीक्षा विशेषता। त्यसैले, तपाईंले आफैलाई यो आवरण सक्दैनन् भन्ने महसुस भने, एक विशेषज्ञ परामर्श।
न्यानो तल्ला कसरी बनाउने
को फिलर अघि पर्खाल धुन। एक प्राइमर कसरी चयन गर्ने?
सेनेटरी सिलिकन सीलेंट: लागू गर्न कसरी र के
संयुक्त वालपेपर - हल को विकल्प पर्खालहरु
कसरी चयन गर्न र भित्री ढोका लागि एम्बेड लक?
लिपिड चयापचय: बोसो चयापचय को आधारभूत चरणमा
मनोरञ्जन केन्द्र "समुद्री तट" - आर्थिक र राम्रो आराम गर्न तरिका
तेल शवर: सबै भन्दा राम्रो चयन
Yuriy BELKIN (पावरलिफ्ट): रेकर्ड
राम्रो उत्पादन: सूत्र, परिभाषा र गणना
रूबिन गैलेगोगो: जीवनी र कामहरू
अन्तस्करणको हितोपदेश। हामी किन एक विवेक चाहिन्छ?
ब्रह्माण्ड - यो ... के हामी उहाँको बारेमा थाहा छ?
किन बच्चाको कपाल बढ्न र यो समस्या कसरी समाधान गर्ने?
यस ल्यापटपमा vinyl पर्चा - यो स्टाइलिश र फैशन!
2017 मा मुख्य नामांकन छ कि "ओस्कार" सिनेमा